Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: toy ny anjelikely latsaka an-tany | NewsMada
Hevitra mandalo, resaky ny mpitsimpona akotry: toy ny anjelikely latsaka an-tany
Mpitondra firenena dia hinohino foana toy ny ankizy manao tsikonina ka hanantena hameno kibo amin’izay voaketrika amin’ny vilany bitika kely. Mbola nanamafy moa ny filoham-pirenena amperin’asa fa ny sori-dàlana pôlitika apetrany no tsy maintsy mametra ny asa fanatanterahana efain’ny governemanta. Ny fifanekena maimaika nifanaovan’ny vondrona samy hafa, fifanekena fototra tamin’ny fananganana governemanta, governemanta izay najoro ho vonjy avotra mba ahafahana manomana ny fanaovana fifidianana ao anatin’ny fahatoniana. Izany rafitra mifampitataho izany ve dia azo heverina fa ampy hanomezana antoka ho amin’izay firarin’ny asa fitantanana ny raharaham-pirenena ? Tsia ! Ny fananganana governemanta teo anivon’ny fitsinjarana andraikitra amin’ireo vondrona izay samy manana ny soritra pôlitika arahany dia efa manambara fa tsy manjaka tokana intsony ny sori-kevitra tsirairay. Izany no nahatonga ny filazana ny fihenan’ny fahefan’ny filoha.
Resaka sy fihetsiketsehana sisa ny asa sy adidy mikasika ny fitantanana ankapobeny izany. Ny minisitra tsy mijery intsony ivelan’ny fikojana ny soritra ahitan’ny olona tohanany tombon-dàlana amin’ny fifaninanana izany hoe amin’ny fifidianana. Na amin’izay lafin’izay aza dia efa ifandroritana. Afaka heverina noho izany fa dia sarotra ny fanefan’ny Praiminisitra ny adidy mivesatra aminy. Mba hisy moa ny fahatoniana eo amin’ny fanaovana ny fifidianana dia anjarany ny fandanjalanjana ny tontolo manodidina an’izany mba tsy hisian’ny fitongilanana amin’ny fanomezana tombontsoa manokana.
Fananana maso tsy miangatra fandraisana fanapahana arak’izany no tsy maintsy asehon’ny mpitarika fahefana. Fahasahiranana manokana anefa no manampy trotraka eo amin’ny fanatanterahana arak’izany ho an’Andriamatoa Christian Ntsay. Na efa nihena aza ny fahefany, mbola eo ihany ny maha filoha an’Andriamatoa Rajaonarimampianina sy ny maha tompon-teny azy eo anivon’ny fahefana mpanatanteraka. Ingahirainy anefa dia efa tazana fa miezaka mafy amin’ny fandresen-dahatra ny vahoaka amin’ny fanatsaratsarana ny tenany. Karazana fanaovana dokambarotra atao hisarihana ny olona hifidy azy. Sarotra ho azy noho izany no hanana fijery sy fanapahana tsy mitongilana.
Tsapa arak’izany koa fa mifanipaka ny fomba fandraisan’ny filoha sy ny Praiminisitra ny adidy izay iombonany anefa. Tsy tokony hatao hahagaga raha mihenjana ny tady. Misy amin’ireo mpiara-miasa akaiky amin’ireo tompom-pahefana roa lahy ireo no milaza mangina fa efa tsikaritra ny fisian’ny disadisa. Vonjy avotra moa izy ity ka afaka heverina fa samy hitandrina tsy hanao ny tafahoatra. Fa izay manota eo no voalohany tsy ho avotra intsony.